Escaper: Munhu Wekutanga Kutiza Kamuri Vhidhiyo Game Kuuya kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
Iye Escaper mutambo mutsva wevhidhiyo wePc, asi ichave zvakare inotakurirwa Linux munguva pfupi. Uyu mutambo wevhidhiyo unonyanya kunakidza, sezvo iri yekutanga imba yekutiza-themed munhu-wekutanga zita rinogona kuuya kweLinux. Uye iwe unogona kuiwana nekukurumidza muchitoro chako chaunofarira online, chiutsi.
Iri zita rave nevatsoropodzi vanonakidza, pamusoro pezvo, vagadziri varo ndivo chaivo ve Nocturnal. Naizvozvo, Iyo Escaper ichave iri kubudirira. Uyu anovandudza achangobva kuzivisa kuburitswa kweWindows, asiwo kuti vari kufunga chiteshi cheLinux. Uye ndeyekuti Manheru akashandisa Kubatana seinjini yemagetsi yeiyo Escaper, iyo inobatsira izvi.
Con Kubatana 3D kuisa mutambo pamapuratifomu kuri nyore, saka pachave nenhau dzakanaka kana iwe ukapedzisira waita izvi. Nekudaro, kana iwe uchida kuyedza izvozvi pane yako Linux distro, unogona kugutsikana nekuitenga kubva kuValve chitoro uye uchishandisa iyo Steam mutengi neProto, kunyangwe ichiri isati yaedzwa zvizere ...
Kana iwe uchinetseka nezve hunhu hwemutambo uyu wevhidhiyo, iwe unofanirwa kuziva kuti Iyo Escaper inosanganisira:
Yakadzama chaiyo-nguva 3D mifananidzo.
Iyo yakasarudzika puzzle-yakavakirwa fizikiki.
4 misoro yemakamuri akasiyana kuti uongorore uye ungatotamba makamuri ekupukunyuka aunoda zvakanyanya.
Zviratidzo zvakanyatsovanzwa pachikuva kuti zvikubatsire kuona kuti ungatiza sei.
Uye mumhanzi wemuchadenga uye maungira emhedzisiro anoisa zvese nenzira isinganzwisisike.
Iyi inzira yekutarisana nemazuva ano nekutamba makamuri ekupunyuka uye kunzvenga kuve muboka kana kubuda mumba mazuva ano ekuvharirwa, nekuti kuzviita online hakuise njodzi kwauri, kana kune vamwe. Rangarira, iva anoremekedza! Basa rako rinogona kuponesa hupenyu ... Uye kunyangwe kana zvese zvisina kumira zvakanaka muProton, zvirinani kuti ungazvivaraidze uye kuzviedze.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Escaper: Chekutanga-Munhu Escape Kamuri Vhidhiyo Game Kuuya kuLinux